Waamicha ABO Oromoota Miseensa ABO Turanii Kaayyoo Bilisummaa Oromoo Qabatanii Jiraniif
Posted: Fulbaana/September 13, 2012 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (10)
Miseensonni ABO hammi tokko yeroo adda addaatti sababoota gargaraatiif dhaaba kanarraa ala tahanii jiraachuun ni hubatama. Kana keessaa kanneen dogoggorfamanii dhaaba saanii jalatti qabsaawuu dhiisanii karaa biraatin tattaafatan ni jiru. Akkasma warri mufatanii harka maratanii taa’an fi warri sbaba adda addaa tin hifatanii qabsoorraa uf fageessanis ni jiru. Warri kaayyoo ganee mooraa diinatti gales akkasma jiru. Haa tahu malee qabsoon isaan ganama itti makaman san daran finiinaa jiraatullee galii abuurrate san hin geenye. Adeemsa kana keessa hireeleen adda addaa dhufanii dabranii jiru. Bu’aaleen xixiqqoon adda addaas argamaniiru. Haala amma empire Ethiopia keessatti uumamaa jirurraa carraa argamuun malutti dhimma bahuu dhaan qabsoo teenya gara fuulduraatti furgaasuun qooda-fudhannaa sabboontota Oromoo yoomiyyuu caalaa barbaada. Kanaaf ABO sabbontota Oromoo yeroo takkatti miseensa isaa turan kanneen kaayyoo bilisummaa saba ufiitti cichanii jiran hundumaaf dhaaba isaanii ABOtti deebi’anii qabsoo isaanii akka itti fufanif waamicha kana dabarsa.
Namni hunduu seenaa adda addaa ka dhaaba kanarraa ala itti taheen qaba. Kan himannaa qabu fi himatama qabus jiraachuun beekamaa dha. Haa tahu malee haalli amma uumamaa jiru dhimma waan taree kanarratti yeroo balleessuuf hiree nuuf hin kennu. Dhimmoota kana laaluu gaafa sabni keenya aanjaa waan akkasii keessummeessuu argateef dhiifnee saba keenya haala gadadoo gada gadaan irratti wal dabraa as gaye kana keessaa baasuurratti xiyyeeffachuun fardii taheera. Yeroo, qabeenya, beekumsa fi moyxanno qabnu hundumaa bilisummaa saba keenyaa tif oolchuun dirqama sabummaa ti jenna. Yaanni haarayni qabsoo tana if dura furgaasu yo jiraate marii bal’oo dhaabicha keessatti geggeessinuun wal fudhachiifnee tartiibaan hujiirra oolchuu wanni nu dhoowwaa tokkolleen hin jiraatu.
Kanaaf sabbontonni kaayoo bilisummaa Oromoof waada seentanii turtan bakkaan gayuuf yaada olitti ifsame kana nu walin qooddattan dhaaba keessanitti deebitanii humna yaada fi waan barbaachisu maraan qabsootti dirmachuun murteessa dha jettan waamicha kana owwaattanii karaa DDA –ABO akka deebisaa kennitan waamicha sabummaa isinif dabarsina. Kanneen karaa DDA-ABO deebisaa kennuun isiniif hin aanjofne karaa caasaa ABO isinitti dhihoo jiruun akka deebisaa keessaan kennitan isiniif hubachiifna. Gama kanaan qaama dhimma kana hordofu utubuu dhan qunnamtii barbaachisu uumuuf tarkaanfiilee duraa fudhanneerra.
Fulbaana 9, 2012
Sep 13, 12 at 12:29 pm
Ya oromo tokko ha taanu. Wantin dhagaha jiru bay’e garidha wanta darbe hunduma dubatti dhifne barumsa irra fudhanne gara fulduraatti tokko ta’u qabna. Anii wanta akkasif kessuma dha. Sirritti na simattu jedhen yada. God bless OROMIA.
Sep 13, 12 at 3:36 pm
Hagahuu nagaan koo kan honnerraa made.yaadaa badaa nama hawwatu kan dhifame hataahu malee karaa kanani hin ganee dhabbaa kana carra kanatii faddame addeemsa kanaafi gufuu tahuu hin malaa kanafuu of eganoo godhaa jidhaa galaatooma
Sep 13, 12 at 11:28 pm
Anis akkuma namoota hedduu as irratti yaada keennaniin, jabaaannee diina jalaa attamitti walhambisuu dandeenya jechuu fakkataa kanaaf hundi keenna walbira dhuufnee otoo yaada waljijjiirree wanta akka Oromotti dalaguun nurra jiru hundaa dalguuf too carraqnee baa’ee gaari natti nfakkaata. kanaaf nu’u ummata kamiyyuu gadi ta’aa deemutti jiraa , jabaachuu qabna. It’s very encouragement idea. very good we will do our best
Sep 13, 12 at 11:51 pm
yaada bayyee bareedaa fi kanaa duraa egaacha turreedha.yaadni keenyaa asiirraan isiin ga’aa taanaan isiinif barreesinaa.sin ga’uu isaa nuuf barreessaa
Sep 14, 12 at 12:53 am
Waamicha saba oromoo fi akkasumas miseensoota ABO turaniif gootaan baayyee gaaridha. Garuu waldootaa oromoo fi saba oromoo waliin hojeechuufi GEEDARUMSAA HOJII guddaan ijaarsichaa irra eegama. Kaayyoo bilisummaa oromoo fi walabummaa oromia eddodhaan ga’uuf toftaa fi tarsimoo akkasumas namusaa GUDDAA saba oromoo fi miseensaa ABO irra barbachisa. Business as usuall jechuun dandii akka kanaan duraan deemuun nu diiga malee nu hin ijaaru. Sabni oromoo DANDII bilisumma tokko kan humna waraansaa tokkoon deegarame, gargaarsaa dandii tookoon argamee dandii tokkon dhimaa itti baa’amu, ABO fi WBO cimaa tokko argachuu fi hawwa. ABO gandan, ammantiin, akkasumaas beekumsan waal ijaaree daboo wal waamatee waliin deemuu hin barbaadu. ABO saba isaa dhageefatu, saba isaaf ulfina qabu, ABO “Accountability fi Substance” qabu barbaada. ABO ofii hojette miseensaa fi saba isaa hojechiisuu barbaada. Gaababaati ABO tokko kan (QC, ULFO, SG..) waliitti hamaatee barbaada. Kanaafi waamicha yeroo gootaan kanaafi of qopheesaa. Fedhiin miseensoota ABO duriifi fedhiin saba oromoo hin geedaramne. Akkataa hojichaatuu geedaramuu qaba ( seeraa fi heeraan buluu, wal qooduu dhiisuu, namusaan hojechuu……).
Sep 14, 12 at 1:37 am
Ibsi amma bahee kun kan kanaan guddoo nama gammachiisa. Qalbiin kenni kana eegaa turte. Miseensotni ABO afaan fajjii hedduun qaxaa keessa seenee qabsoo irraa dhaabatte hedduu dha. Haalli deemaa turee maqaa walxureessuun deemaa ture namoota qabsoo keeysatti wareega guddaa baasaan dhaaba isanii osoo jaalatanii usani akka ta’an ta’eera. Kanaaf haala kana hubachuun tarkaanfii akkasii fudhachuun tarkaanfii barbaachisaa dha. Warri dhaaba keenya irra fedhii keenyaa ala ala baanee jirru waamicha kanaaf deebisa kenninee qabsoo keenya fininsuun ummata keenya qaqqabuun amman jedha.
Sep 14, 12 at 9:57 am
harka fuune yaada yaamicha shanee irraatti waajechuu barbaada akki jedhan HARREE KAAN DHIITTE KAAN CINIINTAA MAAL WALIIN ARDDAA DHRRDDA jedhan
yeroo nagayaa nama ariitanii fixxanii amma hakka qullaa hafanaa fifiiguun homaa gatii hinqabuu.
ammalee gara kaaniin Odaa ergitanii nama arrabsaa fi facaasaa jirtan gama kaaniin yamichi kijibaa gochaa jirtan mee isinumaanuu irraa debiaa uf laalaa
Sep 14, 12 at 11:56 am
Yoo Oromiyaa fi Oromoof yaadee,rakkoo saba kana hiikuuf duri garagartee yaadaa uumnee adda baane, kan hardha waamicha bilisaa fi ifa ta’e kanatti owwaachuu irra eentu waamicha kana tolchee? ebelu faati keessa jirtii jedhee xiinxala mataa keennaa kan itti kenninu yoo ta’e* qaanqee qabsoo(bilisummaa) ummata oromootti urrii akka maraa jirtuu fi diinaaf akka karaa saaqame ture irra akka oromoon hin bayyananne tolchaa jirtu of hindagatina*!!.
Sep 15, 12 at 2:49 am
Waamicha qabsaawota oromoo maraaf gochuun akka yaadaatti eebifamaadha. haa tahuu malee, dimshaashumaan ergaa facaasuun rakkoo ABO keessatti dagaagee salphina amma akka sabaatti keessa jiramuun gaheef furmaata hintahu. xiinxalli xalayichaa akka armaan gadii kana taha.
1: Hoogganummaa Daawid Ibsaa haarayoomsuuf sagantaan kaayame itti fufuu qabaachuu isaa dhugoomsuuf dhaamsa faca’e fakkaata.
2; Rakkoo hooggantooni ShG- GS-ABO dura bu’ummaa Daawid Ibsaa jalatti baroota 14 guutuu hojjachaa turan irraa baratamee jijjiirma fiduuf qophii tahuun dhaamsa dabre keessatti ifatti calaqisu.
3;Baroota 14 guutuu carraa miseensooni ABO hoogganoota GhS-GS-ABOf laatan xumura itti gochuun carraan haarawni xoophiyyaa keessatti dhufu akka oromoo hin dabarre mul’lani (VISION) tokko qabaachuu dhabuun ammaallee dhaamsa keessatti waan argamuuf jijjiirama hundee fiduuf qophii tahuu dhabuu arguun eenyuu oromoo hin rakkisu.
4: Dhaamsi miseensoota sababii adda addaan bahaniif dabre ammaallee dhaaba keessanitti deebi’aa hoogganuma bara 14 guutuu qabsoo gaggeessuun milkii fiduu dadhabe kanaan hoogganamtanii kootaa jechuu calaqisa waan taheef, rakkoo qabsoo oromoo keessa jirtu hiikuu irraa fagoo jiraachuu Daawid Ibsaa argisiisa waan taheef gad fageenyaan itti yaaduu dhabuu caalaa maquumaaf waamicha haa goonuu jechuurraa kan maddee tahuu argisiisa.
Dhumarratti, Yeroo duraaf yaada akkanaa qabachuun jajjabina ilmaan oromoo hundaaf laata. isa itti aanu kana caalaa bifa bilchana qabuufii mul’lata( VISION) balaa oromoon keessa jiru injifachiisuu maluun akka hooggani ShG-GS-ABO gad bahuu abdiin keenya guddaadha.
Sep 21, 12 at 1:53 am
Ani yeroo hedduu waan namoota keenyaa na dhiba. Maaliif yoo jettan waan gaariis waan hamaas hunfa mormina. Kun ammoo aadaa hamaa dha. Waan tokko akka yaadaatti ergaa gaarumma isaatti ammannee yaadii qajeelaan kun akkamitt hojiitti hikamaa irratti hojechuun fiixa baasuu malee gufuu waldura kahuun barbaachisaa miti. Waan qajeelaa fi furmaata biraa hin qabne akkasii akka inni hojiitti hiikamuuf tattafatuun waan nurra eegamu dha jedheen yaada. Kanaaf hunduu akkasitti fudhatee waamicha kana milkeessuuf ha hojjetnu,